Atsaharo ny fandaniam-potoana ary manaova sitrapo izao mba hiarovana ny fianakavianao | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ajanony ny fotoana fandaniana ary manaova sitraka ankehitriny hiaro ny ankohonanao
Safidio ny mpahazo tombontsoanao.
Ny sitrapo dia iray amin'ireo antontan-taratasy manan-danja indrindra izay hataonao hatrizay amin'ny fiainanao. Rehefa niasa mafy nandritra ny taona maro ianao ary nanangona fananana, dia tadiavinao ny fifehezana ireo zavatra ireo sy ny fiainana tsara kokoa ny olon-tianao rehefa lasa ianao.
mampihena ny vesatra ara-bola sy ny adin-tsaina
Fomba ananan'ny Asset any UAE
Ny sitrapo dia manampy amin'ny fanatanterahana izany. Raha mbola tsy nieritreritra ny hanoratra ny sitra-ponao ianao dia tsara ny hanombohanao hiresaka amin'ny mpisolovava iray momba ny famolavolana ny iray aloha kokoa noho ny aoriana.
Inona ny Wills?
A dia hamaritra ny fomba fizarana ny fananana amin'ny fahafatesan'ny tompony, satria mampihena ny enta-mavesatra ara-bola sy ny adin-tsaina amin'ny fianakaviana izany. Tokony hohamarininao fa mety ny didinao raha tsy izany tsy hisy vokany izany, ary ianao dia hoheverina ho maty teo ampovoany. Ny sitrapo dia ampahany iray amin'ny fizotran'ny drafitra trano sy tany manontolo.
Manapaha hevitra hoe inona ny fananana ampidirina amin'ny sitraponao. Manapa-kevitra hoe iza no handova ny fanananao. Misafidiana mpiandraikitra iray hitantana ny fanananao. Mifidiana mpiambina ho an'ny zanakao.
Nahoana aho no mila sitraka?
Ny ampahany farany amin'ny fandrafetana ny toe-karenanao dia ny sitraponao ary misy antony telo izay tsy maintsy anaovanao drafitra feno hatramin'izay.
Voalohany, ny sitraponao no fitaovana enti-manambara amin'ny hafa ny fomba itiavanao ny fanananao hozaraina amin'ny fahafatesana. Raha tsy misy ny dia, ny fanananao dia zaraina araka ny statutory formula fa tsy araka ny fanirianao manokana. Mba hahazoana antoka fa ny olona na ny andrim-panjakana anananao ao an-tsaina dia mandray ny fanananao zarainao ho azy ireo, dia mila ny fanampian'ny mpanolo-tsaina iray ianao hany ka mandrafitra mora foana ny trano aman-trano arak'izay tianao.
Zava-dehibe ny manana sitrapo mba ahafahan'ny olona akaiky anao mahatakatra ny fomba itiavanao ny fanirianao. Amin'ny sitrapo, manome torolàlana mazava momba ny fizarana fananana ianao, mampihena ny adin-tsaina ary fisafotofotoana amin'ny fotoana iray tena sarotra loatra.
Farany, ny manan-kery dia miantoka ny vesatra ara-bola amin'ny ankohonanao. Na izany aza, raha tsy misy finiavana maty rehefa maty, dia hihatra ny lalàna momba ny tsiranoka. Ny dikan'izany dia ny fizarana fananana dia haparitaka araka ny fomba statutory, araka ny voalaza etsy ambony. Ho an'ny fianakavianareo dia mety ho sarotra be ny manomana ireo antontan-taratasy sy manome fahafaham-po ny fepetra takian'ny lalàna amin'ny fitantanana ny fananana tsinay raha ampitahaina amin'ny fahazoan-dalàna, izay mampitombo ny vola sy ny enta-mavesatra amin'ny fianakavianao.
Ny fitsarana UAE dia hanaraka ny lalàna Sharia
Ho an'ireo manana fananana ao UAE dia misy antony tsotra ny hanaovana sitrapo. Nilaza ny tranonkala ofisialin'ny Government of Dubai fa 'ny fitsarana UAE dia hanaraka ny lalàna Sharia amin'ny toe-javatra rehetra tsy misy ilàna azy.
Midika izany raha toa ka maty tsy manana sitrapo na mikasa ny tranonao ianao dia hizaha ny toetoetranao ny fitsarana eo an-toerana ary hizara izany araka ny lalàna Sharia. Na dia mety ho tsara aza izany, dia mety tsy hoatr'izany ny fiatraikany. Ny fananan'ny maty rehetra, ao anatin'izany ny kaonty amin'ny banky dia hangatsiaka mandra-pivoahana ny andraikitra.
Ny vady izay manan-janaka dia ho 1 / 8th monja amin'ny toeram-ponenana, ary raha tsy misy fepetra dia ampiharina avy hatrany io fizarana io. Na ny entana ifampizaràna aza dia hangatsiaka mandra-pahatongan'ny olan'ny lova avy amin'ny fitsarana eo an-toerana. Tsy toy ny sehatra hafa ny UAE dia tsy manao ny ‘zon'ny mpamonjy aina’ (fananana fananana amin'ny tompon'ny mpiara-miasa aminy rehefa maty ny iray hafa).
Ankoatr'izay dia miahiahy ny tompona orinasa, na any amin'ny faritra malalaka na LLC, raha toa ka maty ny mpiampanga na tompon'andraikitra, dia mihatra ny lalàna fisedrana eo an-toerana ary tsy mifandanja tsy mandeha amin'ny alàlan'ny fahavelomana na ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana. Misy ihany koa ny olana momba ny fiambenana ireo zanaka maty zanaka.
Tokony ho malina ny hananana sitrapo miaro ny fanananao sy ny zanakao ary miomana anio amin'ny zavatra rehetra mety hitranga rahampitso.
Inona no hitranga rehefa tsy hisy ny fahafatesana?
Raha maty ny olona iray raha tsy namorona sitrapo dia lasa nantsoina hoe tsinay ary ny taniny dia hapetraky ny lalànan'ny fanjakana izay mamaritra ny lova izay hizaka azy. Misy ny fampiharana ara-dalàna momba ny famindrana fananana ho an'ny maty ho an'ny mpandova mety, antsoina hoe probot.
Koa satria tsy nisy anarana nomena ny mpamono olona, ​​dia nisy mpitsara iray notendren'ny mpitsara iray ho ao amin'io andraikitra io. Raha toa ka heverina ho tsy manan-kery ny didim-pananana iray dia tokony homena anarana ny tompon'andraikitra iray. Mba hanan-kery ara-dalàna ny sitrapo dia tsy maintsy manaraka ny fenitra sasany izy ireo. Na izany aza, miovaova ny fepetra takian'ny fanjakana.
Matetika dia tompon-tany vahiny ny tompon'andraikitra iray, ary na iza na iza izy, dia hofehezin'ny lalànan'ny fitsarana ny fanjakanao. Noho izany, ny tompon'andraikitra iray dia mety handray fanapahan-kevitra izay tsy voatery amin'ny sitrakao na ny fanirian'ny mpandova anao.
Tokony hanana firaisana miaraka amin'ny vadiko ve aho sa manana ny fomba amam-bavantsika?
Ny ankamaroan'ny planner planes dia tsy manome torohevitra amin'ny sitrapo iraisana, ary any amin'ny fanjakana sasany dia tsy ekena akory ireo. Ny ratsy ho anao dia tsy ho faty ny vadinao miaraka, ary mety ho fananana tsy miaraka mihintsy izany. Noho izany, ny misaraka iray dia mitombina, na dia mety tsy hitovy be aza ny sitraponao sy ny vadinao.
Raha ny tokony ho izy, ny fahazoan-dàlana mitokana dia ahafahan'ny mpivady mifanatrika ny olana toy ny mpivady sy ny ankizy amin'ny fifandraisana taloha. Toy izany koa ny fananana azo tamin'ny fanambadiana taloha. Mila aseho ianao hoe iza no mahazo izay. Na izany aza, ny lalàna momba ny fitsarana ny ankamaroany dia ankasitrahan'ny mpivady ankehitriny.
Inona no tombontsoa mety?
Ireo mpahazo tombontsoa amin'ny sitrapo dia ireo olona nomena anarana na asa soa no handova ny fananana na ny fananan'ny maty. Ny sitrapo dia hamantatra sy mamaritra hoe iza avy ireo nahazo tombony ary inona no lova tokony ho azony.
Ny mpandova iray dia tokony hahatsapa fa nomena anarana ho tombontsoa ao amin'ny sitrapo, ary koa ny lova manontolo notendrena azy ireo. Na izany aza, ny mpahazo tombontsoa dia afaka mandray, manombatombana na mijery ny lovan'izy ireo taorian'ny nahavitan'ny mpampanoa lalàna tamim-pahombiazana ny fizahana sy ny fananana fananana nafindra ho an'ny mpampiasa.
Iza no Mpanatanteraka (Executrix)?
Ny mpanatanteraka dia olona izay mitantana ny adidy sy andraikitra rehetra eo amin'ny fitantanana ny fanirian'ny fitsapana arahana araka ny sitrapony. Io olona io dia manary ny fananana amin'ny fahafatesan'ny testator, mandoa hetra ara-lova na aloa, ary miakatra fitsarana. Mety misy mpanatanteraka efatra ao amin'ny sitraponao, ary mety hahazo sitraka amin'ny sitrapony koa izy ireo.
Zava-dehibe ny manendrena olona azo itokisana ho mpampihatra andraikitra satria izy ireo no manaraka ny torolàlana toy ny antsipiriany ao amin'ny sitrapo. Rehefa nanapa-kevitra ny mpanatanteraka iray ianao, dia hosoratanao ny sitrapony feno sy ny adiresiny amin'ny sitraponao. Tokony hapetraka sy hifandray amin'ny mpampindram-pahefana ny tompon'andraikitra rehefa ilaina ny andraikiny.
Isaky ny inona no mila havaozina?
Azo inoana fa tsy voatery hanavao ny sitraponao ianao na mety hisafidy hanavao foana tsy tapaka. Manapa-kevitra tanteraka ianao. Na izany aza, tadidio fa ny hany dikan'ny sitraponao izay zava-dehibe dia ny tena misy ankehitriny izay misy amin'ny fotoana hahafatesany.
Raha mitadidy an'izany, dia azonao atao ny mamerina mijery ny sitraponao indraindray rehefa misy fiovana lehibe. Anisan'izany ny fotoana manan-danja toy ny fisaraham-panambadiana, ny fiterahan-janaka iray, amin'ny fahafatesan'ny mpahazo na mpampiasa azy, ny fividianana na lova lehibe, sy ny sisa. Ary koa, rehefa lasa olon-dehibe ny zanakao, tsy misy dikany ny hananana mpiambina anarana amin'ny sitrapo, na dia afaka miantso ho an'ny fianakavian'ireo sembana aza ny mpiambina.
Iza no manana zo hifandahatra amin'ny sitrapoko?
Ny fifaninanana a dia midika ho fanamby ny ara-dalàna na ny ampahany na ny ampahany amin'ny antontan-taratasy. Ny mpahazo tombony iray izay mahatsiaro ho voafitaky ny voalazan'ny sitrapo dia mety hisafidy ny hifaninana amin'izany. Toy izany koa ny mpivady, na ny vady taloha, na ny zaza mino fa ny faniriana voalaza dia manohitra ny lalàna mifehy eo an-toerana.
A dia azo hotsaraina noho ny antony maro samihafa:
Raha tsy nitorian'izy ireo tsara izany.
Raha tsy nahay ianao rehefa nanao sonia azy.
Na nosoniavina noho ny famoretana na hosoka.
Ny mpitsara dia ilay handamina ilay fifamaliana. Ny fanalahidy hahomby amin'ny fifaninanana sitrapo dia rehefa misy ny lesoka ara-dalàna ao anatiny. Ny fiarovan-tena tsara indrindra, na izany aza, dia namboarina mazava tsara ary ekena faingana.
Arovy amin'ny fatorana ara-dalàna ny havanao.
Mifidiana mpiambina ho an'ny zanakao.